Ukhuseleko lweWebhu luyichaphazela njani i-SEO | Martech Zone
Ngaba uyazi ukuba malunga ne-93% yabasebenzisi baqala amava abo oku-web ngokuchwetheza umbuzo wabo kwinjini yokukhangela? Lo mfanekiso mhle akufuneki ukukumangalise.
Njengabasebenzisi be-intanethi, siqhele ukuhlala lula ekufumaneni kanye le nto siyifunayo kwimizuzwana ngeGoogle. Nokuba sikhangela ivenkile evulekileyo ye-pizza ekufutshane, isifundo sendlela yokuluka, okanye eyona ndawo yokuthenga amagama e-domain, silindele ukwaneliseka kwangoko kunye neempendulo ezisemgangathweni ezanelisa injongo yethu yokukhangela.
Ixabiso lokugcwala kwezinto eziphilayo libeke ukwenziwa kweinjini yokukhangela kugxilwe, njengoko lilitye lembombo lokwakha ukubonakala okungcono kwi-Intanethi. UGoogle ngoku uvelisa ngaphezulu Ukukhangelwa kwe-3.5 yezigidigidi ngosuku kunye nabasebenzisi bayayibona i-SERP yayo (iphepha lesiphumo seinjini yokukhangela) njengesalathiso esithembekileyo sokubaluleka kwewebhusayithi.
Xa kuziwa ekusebenzeni kwe-SEO esebenzayo, sonke siqhelene neziseko. Ukusetyenziswa kweqhinga kunye nokusetyenziswa kwamagama aphambili kuyacetyiswa, kunye nokwenza ngcono iithegi ze-ALT, ukuza neenkcazo ezifanelekileyo zeemeta, kwaye kugxilwe ekuveliseni umxholo wokuqala, oluncedo noluxabisekileyo. Ukwakha ikhonkco kunye nokufumana ikhonkco ziyinxalenye yepuzzle, kunye nokwahlula imithombo yezithuthi kunye nokusebenzisa iqhinga lokuhambisa umxholo.
Kodwa kuthekani ngokhuseleko lwewebhu? Iphembelela njani iinzame zakho ze-SEO? UGoogle konke malunga nokwenza i-intanethi indawo ekhuselekileyo nenokonwaba, kungoko unokufuna ukuqinisa ukhuseleko lwakho lwewebhu.
I-SSL ayisiyiyo ukhuseleko kunye, kodwa iyimfuneko
UGoogle uhlala ekhuthaza iwebhu ekhuselekileyo kwaye ephakamisa iiwebhusayithi kufuneka ziye kwi-HTTPS ngokufumana isatifikethi se-SSL. Esona sizathu siphambili silula: idatha ifihlwa ngokuhamba, kuthintela nakuphi na ukusetyenziswa gwenxa kwemfihlo kunye nolwazi olubuthathaka.
Iingxoxo ze-HTTP ngokuchasene ne-HTTPS kwimeko ye-SEO egxothiweyo kwi-2014 xa uGoogle wabhengeza iiwebhusayithi ezikhuselekileyo zinokufumana ukonyuka okuncinci. Kunyaka olandelayo, kwacaca ukuba lo mqondiso wenqanaba uthwele ubunzima nangakumbi. Ngeli xesha, uGoogle uxele ukuba isatifikethi se-SSL sinokunika iisayithi ukhuphiswano kwaye sisebenze njenge-tiebreaker phakathi kweewebhusayithi ezimbini ezingaphezulu okanye ngaphantsi, ezikumgangatho ofanayo.
Intsebenziswano enkulu Uphononongo olwenziwe nguBrian Dean, Semrush, Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb, kunye neClickStream, bahlalutya iziphumo ezi-1 zeGoogle zophando kwaye baqaphela ulungelelwaniso olomeleleyo phakathi kweendawo ze-HTTPS kunye nenqanaba lokuqala lephepha. Ngaphandle kokuthetha, oku akuthethi ukuba ukufumana isatifikethi se-SSL ngokuzenzekelayo kukunika isikhundla esisezingeni elingcono, kwaye ayisiyiyo eyona nto ibaluleke kakhulu ekumiseleni i-algorithm.
UGoogle upapashe ifayile ye Isicwangciso esinamanqanaba amathathu usiya kwiwebhu esebenzayo ngakumbi nekhuselekileyo kwaye wabhengeza ukukhutshwa kohlaziyo lweChannel 68 kaJulayi 2018, eya kuphawula zonke Iiwebhusayithi ze-HTTP zingakhuselekanga ngaphakathi kwesikhangeli sewebhu. Sisibindi, kodwa linyathelo elinengqiqo, eliya kuqinisekisa ukugcwala kwezithuthi kwihlabathi liphela, kubo bonke abasebenzisi, ngaphandle kokukhetha.
Iiwebhusayithi ze-HTTPS kulindeleke ukuba zingagqibeki, kodwa uninzi lweewebhu zisadidekile usifumana njani isatifikethi se-SSL kwaye kutheni le nto ibaluleke kangaka.ere zizibonelelo ezimbalwa ezingenakuphikwa, zombini ngeendlela ze-SEO kwaye zibambe umfanekiso wohlobo oluthandekayo:
Ukunyusa inqanaba lewebhusayithi ye-HTTPS kulindeleke
Inqanaba elifanelekileyo lokhuseleko kunye nemfihlo liyaphunyezwa
Iiwebhusayithi zihlala zilayisha ngokukhawuleza
Iwebhusayithi yakho yeshishini inokuthenjwa ngakumbi kwaye yakha ukuthembana (ngokwe Uphando lweHubSpot, I-82% yabaphenduli bathe bazakushiya isiza esingakhuselekanga)
Yonke idatha ebuthathaka (umzekelo, ulwazi lwekhadi letyala) likhuselekile ngokukhuselekileyo
Ngokufutshane ubeke, nge-HTTPS, ubunyani, ukuthembeka kwedatha, kunye nokugcinwa kwemfihlo kugcinwa. Ukuba iwebhusayithi yakho yi-HTTPS, yenza esona sizathu saneleyo sikaGoogle sokukuvuza njengomntu onegalelo kukhuseleko lwewebhu ngokubanzi.
Izatifikethi ze-SSL zingathengwa, kodwa kukwakho namanyathelo okhuseleko lwewebhu kwihlabathi liphela elinikezela nge-cryptography yanamhlanje ngaphandle kwentlawulo, Masibhale. Gcina nje ukhumbula ukuba izatifikethi ezibonelelwe ngulo mbutho wegunya lesatifikethi zihlala iintsuku ezingama-90 kwaye kufuneka zihlaziyiwe. Kukho ukhetho oluzenzekelayo lokuhlaziya, ngokuqinisekileyo oludibeneyo.
Kuphephe Ukuba liXhoba loLwaphulo-mthetho olwenziwa kwi-Intanethi
I-cybercrimes iguqukile: ziye zahluka ngakumbi, zinobunkunkqele, kwaye kunzima ukuzibona, ezinokulimaza ishishini lakho kumanqanaba amaninzi. Kwezona meko zinzima, iinkampani ziyanyanzelwa ukuba zinqumamise ukusebenza kweshishini de kube kukhubazeke ukhuseleko lwewebhusayithi, olunokubangela ilahleko kwingeniso, ukuhla kwamanani, kunye nezohlwayo kuGoogle.
Njengokuba ukuhlaselwa ngabagculeli akunoxinzelelo ngokwaneleyo.
Ngoku, makhe sixoxe ngobuqhetseba obuqhelekileyo kunye nohlaselo kunye nendlela abanokonakalisa ngayo iinzame zakho ze-SEO.
● Ukuchazwa kweWebhusayithi kunye nokuSetyenziswa kweServer
Ukuchithwa kwewebhusayithi kukuhlaselwa kwewebhusayithi etshintsha imbonakalo yendawo. Ngokwesiqhelo ngumsebenzi wabangcolisi, abangena kwiserver yewebhu kwaye bathathe indawo yewebhusayithi ebanjelwe enye yabo kwaye benza enye yemicimbi ephambili xa kuziwa kukhuseleko lwe-Intanethi. Kwiimeko ezininzi, abagculi basebenzise ithuba lokuba semngciphekweni kwiseva kwaye bafumane ukufikelela kulawulo besebenzisa Inaliti ye-SQL (Inkqubo yekhowudi yenaliti). Enye indlela eqhelekileyo yeza kukusetyenziswa gwenxa iinkqubo zokudlulisa iifayile (ezisetyenziselwa ukuhambisa iifayile phakathi kweseva kunye nomxhasi kwinethiwekhi yekhompyuter) ukufumana ulwazi olubuthathaka (iinkcukacha zokungena) ezisetyenziselwa ukubuyisela iwebhusayithi esele ikhona nenye.
Izibalo zithi zibekho ubuncinci ama-50.000 aphumeleleyo kwiwebhusayithi ngo-2017, kwaye kwiimeko ezininzi-sithetha ngokuchazwa kobuninzi beewebhusayithi ezifanelekileyo. Olu hlaselo lwehacker lunenjongo ephambili: zisetelwe ukuba ziyonakalise inkampani yakho kwaye zonakalise igama lakho. Ngamanye amaxesha, utshintsho olwenziweyo lufihlakele (umz., Imigewu itshintsha amaxabiso eemveliso kwiivenkile zakho ezikwi-Intanethi), ngamanye amaxesha-bafaka umxholo ongalunganga kwaye benze utshintsho olunzima ekunzima ukuphoswa.
Akukho sohlwayo ngokuthe ngqo se-SEO sokuchazwa kwewebhusayithi, kodwa indlela iwebhusayithi yakho ebonakala ngayo kwi-SERP iyatshintshwa. Umonakalo wokugqibela uxhomekeke kutshintsho olwenziwe, kodwa kusenokwenzeka ukuba iwebhusayithi yakho ayizukuhambelana nemibuzo ebikade isenziwa kuyo, eya kwenza ukuba irenki yakho ibe yeplimet.
Ezona ntlobo zimbi zokuhlaselwa kwabantu ngokujolisa kuzo zonke, ezinokukhokelela kwiziphumo ezoyikisayo. Ngokufumana ukufikelela kwiseva ephambili (okt i "mastermind computer"), banokuyisebenzisa ngokulula kwaye balawule iwebhusayithi ezininzi ezibanjelwe apho.
Nazi ezinye zeendlela zokuthintela ukuwa njengexhoba apha:
Khetha i-firewall yesicelo sewebhu esithembakeleyo (WAF) -isetyenziselwa imigaqo emiselweyo egubungela uhlaselo oluqhelekileyo olufana nokubhalwa kwesiza esinqamlezayo kunye nenaliti ye-SQL, ngaloo ndlela ikhusela iiseva.
Gcina isoftware yakho yeCMS ihlaziyiwe - i-CMS imele inkqubo yolawulo lomxholo, esisicelo sekhompyuter esixhasa ukwenziwa kunye nokulungiswa komxholo wedijithali kwaye ixhasa abasebenzisi abaninzi kwindawo yokusebenzisana.
Khuphela kwaye usebenzise kuphela iiplagi ezinokuthenjwa kunye nemixholo (umz. Themba isikhombisi seWordPress, kunqande ukukhuphela imixholo yasimahla, ukubala ukubala kunye nokuphononongwa njl.njl.)
Khetha ukubamba ngokukhuselekileyo kunye nengqondo ukhuseleko lwommandla we-IP
Ukuba usebenzisa iseva yakho, nciphisa ubungozi ngokuthintela ukufikelela kwiseva
Ngelishwa, akukho 100% ukhuseleko kwi-cyberpace, kodwa ngenqanaba eliphezulu lokhuseleko-ungawanciphisa kakhulu amathuba okuhlaselwa ngempumelelo.
● Ukuhanjiswa kweMalware
Ukuhanjiswa kweMalware kubakho ngoku kakhulu xa kuziwa kuhlaselo lwe-cyber. Ngokutsho kwegosa ingxelo ngeLebhu yaseKaspersky, iyonke i-29.4% yeekhompyuter yomsebenzisi ihlupheke okungenani kuhlaselo olunye lwe-malware ngo-2017.
Ngokwesiqhelo, imigewu zisebenzisa ubuchwephesha bokuphamba okanye ubuqhetseba ukuzibonakalisa njengomthombo onokuthenjwa. Ukuba ixhoba liwela kulo kwaye likhuphele isoftware enobungozi, okanye licofe kwikhonkco elikhupha intsholongwane, ikhompyuter yabo iyosuleleka. Kwiimeko ezimbi kakhulu, iwebhusayithi inokuvalwa ngokupheleleyo: i-hacker inokusebenzisa ukulawula okukude ukungena kwikhompyuter yexhoba.
Ngethamsanqa kukhuseleko lwewebhu ngokubanzi, uGoogle akachithi naliphi na ixesha kwaye uhlala esabela ngokukhawuleza kuluhlu lwabamnyama kuzo zonke iiwebhusayithi eziyingozi okanye ezinetyala lokuhambisa i-malware.
Ngelishwa kuwe njengexhoba, nangona ayilotyala lakho- iwebhusayithi yakho ibhalwa njengogaxekile kude kube kukwazisa, ukuvumela yonke impumelelo yakho ye-SEO ukuza kuthi ga ngoku iye ezantsi.
Ukuba wena, thixo uyala, yaziswa nguGoogle ngaphakathi kwiKhonkco lakho lokuKhangela malunga nobuqhetseba, isoftware engafunekiyo, okanye ukubulala, kuya kufuneka uthathe inyathelo kwangoko.
Luxanduva lwakho, njengomphathi wewebhu, ukuyibeka yodwa indawo yakho, ukuvavanya umonakalo, ukufumanisa ubungozi. Nangona kubonakala ngathi akukho sikweni, kuxhomekeke kuwe ukucoca lo monakalo kwaye Cela uphononongo lwewebhusayithi kuGoogle.
Khumbula, uGoogle uhlala esecaleni labasebenzisi kunye nokhuseleko lwabo. Qiniseka, uya kubonelelwa ngenkxaso epheleleyo yokulungisa izinto.
Kuyacetyiswa ukuba uqhubeke ngokuhlaziya inkqubo yakho ye-antivirus kwaye usebenzise ukuskena rhoqo, uthathe ithuba lokukhetha izinto ezininzi zokuqinisekisa ukukhusela ngokufanelekileyo iiakhawunti zakho ze-Intanethi, kunye nokubeka esweni impilo yendawo yakho.
Iingcebiso ezisebenzisekayo zoKhuseleko kwiWebhusayithi
Rhoqo kunangoku, siyakholelwa ukuba amathuba okuba lixhoba lolwaphulo-mthetho olungenakwenzeka. Inyaniso yile, inokwenzeka nakubani na. Akunyanzelekanga ukuba uqhube ishishini elinobutyebi okanye ube kurhulumente ukuze ube yinto ekujolise kuyo. Ukongeza kwizizathu zezezimali okanye iinkolelo zobuqu, abagxeki bahlala behlasela iisayithi ngenjongo yolonwabo, okanye ukwenza izakhono zabo.
Sukwenza iimpazamo ze-rookie ngokubhekisele kukhuseleko lwewebhusayithi yakho. Ngaphandle koko-nokuba imizamo yakho ye-SEO ihlawulwayo iya kuba yeyona nto incinci kwiingxaki zakho. Ukongeza kwinto esele siyikhankanyile kwicandelo elidlulileyo ngokubhekisele kwiinkqubo ezicetyiswayo zokuphepha ukungangqinelani kwewebhusayithi, ukuphamba, ubuqhetseba, kunye nosulelo lwe-malware, unezingcebiso zilandelayo engqondweni:
Ngokucacileyo, ukwenza igama eligqithisiweyo elingenakulindeleka ukuba lilandelwe (landela Iingcebiso zikaGoogle zamaphasiwedi akhuselekileyo)
Lungisa nayiphi na imingxunya yokhuseleko (umzekelo, ukubeka esweni kakubi ukufikelela kulawulo, ukuvuza kwedatha okunokwenzeka, njl.
Qiniseka ukuba ubhalisa igama lakho lesizinda kunye nombhalisi othembekileyo kunye nokuthenga ukubamba ngokukhuselekileyo kwewebhu
Phinda ucinge ukuba ngubani onokufikelela kwiinkqubo zakho zokudlulisa iifayile kunye nedatha
Qiniseka ukuba ukhuphela iwebhusayithi yakho kwaye uze nesicwangciso sokubuyisela kwimeko apho uza kungena khona
Le yincam nje yomkhenkce. Inyani yile, awusoze ulumke kakhulu - yithathe komnye umntu obandakanyeka ngokuthe ngqo kumzi mveliso wewebhu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuphucula ubukho bakho kwi-Intanethi kunyanzelekile kuba abathengi baxhomekeke kuGoogle ukufumana ulwazi olukhawulezileyo malunga neshishini lakho kunye neemveliso / iinkonzo ozinikelayo, kodwa bayayisebenzisa ukucoca iinketho zabo kunye nokukhetha eyona ilungileyo kubo. Ukuba ugcina engqondweni iingcebiso zokhuselo ezikhankanywe apha ngasentla kwaye utshintshela kwi-HTTPS, ngelixa utyala imali kumnqwazi omhlophe we-SEO, unokulindela ukunyuka kancinci kwi-SERP.
Ukhuseleko lwewebhu ngokuqinisekileyo kufuneka lube yeyona nto iphambili kuwe, kwaye ayisiyiyo eyokufumana nje izibonelelo ze-SEO.
Kubaluleke kakhulu kumava okusinga ngokukhuselekileyo kumsebenzisi ngamnye, kunye nokuthengiselana okuthembekileyo kwi-Intanethi. Iyanciphisa amathuba okunyuka kunye nokusasazwa kwe-malware kunye neentsholongwane kunye nokugxotha ezinye iinzame zolwaphulo-mthetho ezibandakanya ubusela besazisi okanye imisebenzi yokuqhekeza. Akukho shishini likhuselweyo, ke ngaphandle kokujolisa kweshishini lakho, kuya kufuneka uzame ngako konke okusemandleni ukugcina elona nqanaba liphezulu lokhuseleko kwiwebhusayithi kunye nokwakha ukuthembela kubathengi nakubathengi bakho. Ngapha koko, njengomphathi wewebhu- unoxanduva lokwenza njalo.
tags: i-cybercrimeLokulobaUhlolo lukaGooglehttphttpsNguyenvumela ukubethelapasswordenjini yokukhangela nounkhusela iiphasiwediukhuselekoSEOukuphangasql inalitiuphononongo lwewebhusayithi
Yintoni umahluko phakathi kwe-AI kunye nokuFunda kweMatshini?